allsanaag.com - Dhuxushii Kismaayo Dekeda Boosaaso ayaa bedeshay
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3208	Days	11	Hours	20	Minutes	17	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Dhuxushii Kismaayo Dekeda Boosaaso ayaa bedeshay
Written by khalid	Guryaha Muqdisho oo aad sheeganaysaan ha inoo danbeeyeen, maanta Dekeda Boosaaso lacagta ka soo baxda ayaan u baahanahay.
Hadaad sugaysay Gurigaad Muqdisho ku lahayd inaad dib u hesho , Maanta waxa loo soo socdaa waa shilimada ka soo baxa Dekeda Boosaaso.
Ururka HAG (Hawiye Action Group), oo qaar badan oo ka mid ah xubnaha ururkaas ay maanta hogaaminayaan dawlada Xasan Culusoow ayaa waxay leeyihiin halhays u qarsoodi ah oo ah Af Talyaaniga , waana " La mala erba non muore mai.Teedyada anaa leh Taadana kula lehi. Macnaha ka danbaeeya Xikmadan, ayaa waxay tahay in Reer Puntland Dekeda Boosaaso waxa ka soo baxa ay iyagu gooni u leeyihiin, hase ahaatee Madaxdooda ku jirta Dawlada Soomaaliya Mushahaarka ay qaataan laga siiyo lacagta ka soo baxda Dekeda Muqdisho.
Madaxweynaha Culusow iyo Odayga hadlaya " Fiiri Qoraalada isku midka ah oo ku qoran meesha ay taagan yihiin. Nabbad iyo Cadaalad waa mid loola jeedo Ururka HAG. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Culusoow oo inta badan qaata fikrka Ururka uu ka ka midka ahaan jiray ee HAG, ayaa sheegay in Dekededa Boosaaso ay tahay Hanti Qaran sidaas awgeed wixii ka soo baxa ay ka dhaxeeyaan Dhamaan Umadda Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Soomaliya, marna kama hadlin Kaalmada Caalamku ugu deeqo Soomaaliya oo aan soo dhaafin Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Madaxweynaha Soomaaliya marna kama hadlin Ciidamada lagu sheego Ciidanka qaran in dhamaantood ay yihiin Beeshiisa, waana ciidanka Turkigu hubaynayaan oo tababarayaa.
Gebagebadii waa wax laga xumaado madaxwynaha Soomaaliya Xasan Culusoow oo aan ka hadlin Askarii Soomaaliyeed oo argagixisadu ku dishay degaanada Puntland , dagaalkii shalay ka dhacay Buurta Calmadow,weerarkii jabhada SNM ku soo qaaday Bulshada midnimada jecel ee Sool iyo Sanaag in uu maanta soo hunguriyeeyo shilimada ka soo baxa Dekeda Boosaso